कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिक: पांगाको जात्राको दिनमा साच्चैं पृथ्वी ध्वस्त हुने नै हो त ?
पांगाको जात्राको दिनमा साच्चैं पृथ्वी ध्वस्त हुने नै हो त ?
पांगामा आफ्नो मामाघर भएका एक ३५ बर्षिय कीर्तिपुरका एक महिलाले आफ्ना साथीहरूलाई सुनाउदै हिडेकी छिन कि आउदो पांगा जात्रामा पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ रे । हामी त त्यो बेलामा जात्रा हेर्दा हेर्दै मर्छु होला । कीर्तिपुरमा जन्म भई पागांमा निधन हुन पाउनु भाग्यमानीहरू भन्छन् । त्यसैले हामी त जे भएपनि त्यो दिनमा परिवार सहित पांगामा जात्रा हेर्न जान्छु ।
त्यस्तै गरि एक कीर्तिपुरका पुरुषले भन्दै हिडेका छन् कि डिसेम्बर २१ तारिको दिनमा पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ रे । यो बास्तवमा हल्लामात्र हो कि सच्चै नै हुने हो त्यहि दिनले थाहा पाउनेछ ।
पागांका एक युवक भन्नु हुन्छ ‘पांगाको जात्राको दिनमा त विहानै देखि अँध्यारो हुन्छ रे । त्यो दिनमा नै जात्रा परेको छ के हुने हो । जे सुकै भएपनि जात्रा मनाउने मानसिकतामा पुगेको छ ।’
अहिले कीर्तिपुर क्षेत्रमा यस्तै प्रकारका हल्ला भएका छन् । अहिले कीर्तिपुर क्षेत्रमात्र नभै विश्वमा नै एक ढंगको हल्ला चलेको छ कि ‘आउँदो डिसेम्बर महिनाको २१ तारिख (पौस ६ गते जुन दिनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको पांगामा विष्णुदेवी र वालकुमारीको भब्य जात्रा हुन्छ) शुक्रवारको दिनमा विश्व ध्वस्त हुन्छ/प्रलय हुन्छ ।’
यस्तो प्रकारका हल्लाले सबै भन्दा पहिले गृहणीहरूको माध्यमवाट परिवारमा पुग्दो रहेछ । यसको अर्थ गृहणीहरूलाई प्रभाव पार्दो रहेछ । अन स्कूलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि यस्तो प्रकारको हल्लाले असर पार्दो रहेछ ।
यस्तो हल्ला हुनुको प्रमुख कारण भनेको माया पात्रो हो । सो पात्रोमा डिसेम्बर २१ पछिको नयाँ तिथिमिति नभएका कारणले नै सो हल्ला ब्यापक भएको हो ।
अहिले आएर यो हल्लाले अलि ब्यापकता पाएको छ । आज भन्दा केहि महिना अघि स्कूलका विद्यार्थीहरूले नभनेको पनि हैन । तर त्यति बेला खासै वास्ता गरिन । त्यो ठूलो किसिमको हल्ला हैन होला भनी मलाई लागेको थियो । तर अहिले आएर त साच्चै यो हल्ला नेपालमा भन्दा पनि विकसित मुलुकमा बढि भइरहेको अवस्था छ ।
कुनै कुनै देशमा तक डिसेम्बर २१ र २२ लाई नयाँ विश्वको सुरुवाट भनी विश्व सम्मेलन नै गर्न तयारी गरेका छन् । कुनै कुनै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो विषयमा आधिकारीक सम्वोधन गरेका छ । जे सुकै भएतापनि अहिले सम्म यो हल्ला मात्र हो भनी बैज्ञमानिकहरूले दावी गरेका छन् । डिसेम्बर २१ तारिकका दिनमा विश्व ध्वस्त हुने कुनै आधार छैन भनी दावी गरेका छन् ।
Posted by raj shrestha at 12:31 PM